पहिरोले जलविद्युत आयोजना बन्द::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, २४ साउन –गाउँलेले चन्दा संकलन गरेर बनाएका जिल्लाका दुई लघु जलविद्युत आयोजना बन्द हुँदा दुई हजार घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । निसीखोलाको वडा नं. २ देखि ५ सम्मका बासिन्दाले बालेको बिजुलीअन्र्तगत निसीखोला लघु जलविद्युत आयोजना दोश्रोको नहर पहिरोमा खसेपछि गाउँलेहरु अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । उक्त आयोजनाबाट १ हजार १ सय घर अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
१ सय किलोवाट क्षमताको यो विद्युतबाट स्थानीयले कुटानी पिसानी मिल पनि चलाएका थिए । त्यस्तै, फर्निचार, कुखुरापालन लगायतका घरेलु उद्योग संचालनमा थिए । ती उद्योगमा समेत क्षति भएको हो । एक साताअघि निसीखोला पहिलोको विद्युत गृहमा खराबी आएकोले मर्मत गर्न नसक्दा ९ सय घर अन्धकारमै थिए । १ सय किलोवाट क्षमताको यो बिजुली अभावमा मानिसले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । विद्युत अभावमा मोबाईल समेत चार्ज गर्न नसक्दा सम्पर्क पनि गर्न नसकेको उनीहरुले बताए । दुवै आयोजना बन्द भएपछि बोहोरागाउँ, देविस्थान, निसी, कालीगाउँ लगायतका गाउँ अन्धकार भएका हुन् ।
गत आइतबार बडाचौर भन्ने स्थानको पहिरोले निसीखोला लघु जलविद्युत दोश्रोमा क्षति पुगेको हो । पक्की कुलोको जग समेत बगाएकोले लाखैं खर्चेर मात्र बनाउन सकिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसका लागि स्थानीयले संभावनाको खोजी गरिरहेका छन् । यि दुवै आयोजना भएको स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको विद्युत पुग्ने संभावना छैन । बर्षौ पुग्न नसक्ने देखेपछि स्थानीयले चन्दा संकलन गरेर बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सहयोग समेत जुटाएपछि दशक घि आयोजना बनाएका थिए । यो क्षेत्रका सबै गाउँमा लघुविद्युत मात्र छन् ।